AbeMetro FM bachithe ingxoxo noChris Brown | isiZulu
AbeMetro FM bachithe ingxoxo noChris Brown
URihanna ukhiphe iculo noChris Brown
URihanna uzisondeza kumama kaChris
Ukushaywa othandiweyo wakho kuhlukile - Umbono
Johannesburg - Kungenzeka ukuthi uneculo elishisa izikhotha umculi waseMelika uChris Brown elicela abantu ukuthi bangamehluleli, kodwa lokho akuwenzanga umehluko kubethuli bohlelo kuMetro FM ngesikhathi beshaya phansi ngonyawo bethi ngeke babe nengxoxo nalo mculi.
U-Amon Mokoena noThato ­Mataboge, nabashayela uhlelo lwasemini kulesi siteshi iThe Secret Ingredient, bathe ngeke bazimatanise nalo mculi.
"Asifuni ukuhlanganiswa noChris Brown. Simatasa sishumayela ivangeli le-16 Days Against Women and Child Abuse kodwa futhi kuthiwa asijabulele le khonsathi. Sonke siyazi ukuthi wenzani," kusho uMataboge ­echaza ku-email.
Kuma-email athunyelwa phakathi kuka-5 kuya ku-12 Disemba phakathi kwalaba bobabili nomphathi wezinhlelo uCaren Olsen, owezokumaketha uHazel Tlhabanyane nomphathi siteshi uMartin Vilakazi, bazwakalisa ukumelana kwabo nekhonsathi kaBrown, iCarpe Diem, eqhubeka kuleli.
"Akwehli kahle kithina. Njengamadoda emizi nabantu abanemindeni asikaze sishaye muntu wesifazane," kuqhuba uMataboge.
UBrown watholakala enecala lokushaya owayeyintombi yakhe uRihanna ngo-2009.
Okhulumela iSABC uKaizer Kganyago uthe ukuziphatha kwalaba bobabili kulimaza ibhizinisi.